सावधान ! पुरुषहरूमा बाँझोपन ल्याउँछ यी खानेकुराले – Idea Khabar
आइडिया खबर२०७६ आश्विन १८, शनिबार १५:२२
पछिल्लो केही वर्ष यता नेपालमा बाँझोपनको समस्या तीव्र गतिमा बढ्दो छ । त्यसमा पनि पुरुषमा हुने बाझोपनको ग्राफ निकै तीव्र गतिमा बढ्दो छ ।
बाँझोपन बढ्नुमा जीनको मात्र दोष नभई अस्वस्थकर खानपान, धूमपान, मद्यपान आदि कुराको सेवनले पनि बाँझोपनको समस्या बढ्ने गरेको छ । त्यसबाहेक केही यस्ता खानेकुरा पनि छन् जसको सेवनले सेक्स लाइफमा मात्र असर पार्दैन, पुरुषहरूमा बाँझोपनको समस्या समेत निम्त्याउने गर्छ । के छन् त त्यस्ता खानेकुरा :
१. प्रोसेस्ड मासु
मासु धेरैलाई मन पर्छ । मासु खानु स्वास्थ्यका लागि राम्रो पनि मानिन्छ । तर कुनै पनि मासु छान्दा सही मासुको छनोट गर्नु जरुरी छ । मासु अर्गानिक छ भने त समस्या हुँदैन तर प्रोसेस्ड मिट खानु स्वास्थ्यका दृष्टिले त्यति फाइदाजनक मानिँदैन । प्रोसेस्ड मिटले स्पर्मको गुणस्तरमा कमी ल्याउने गर्छ ।=
त्यसमा पनि ह्यामवर्गर, हट डग, सलामी लगायतमा प्रयोग हुने प्रोसेस्ड मिटले स्पर्म काउन्ट झण्डै २३ प्रतिशतले कम गर्दछ । प्रोसेस्ड मिटले हर्मोनमा गडबडी गराउने हुँदा यसले प्रजनन प्रणालीमा हानी पुर्‍याउने गर्छ ।
२. फ्याटयुक्त दुग्धजन्य पदार्थ
फ्याटले भरिपूर्ण दूध, चीजजस्ता दुग्धजन्य पदार्थले स्पर्मको प्रभावकारितामा असर पार्ने गर्छ । दैनिक फुल फ्याट दूध पिउनाले पनि स्पर्म काउन्टमा कमी हुनसक्छ । दिनमा कम्तीमा दुईपटक फुल फ्याट डेयरी प्रोडक्टको सेवनले यस किसिमको नोक्सान हुनसक्छ ।
३. चिनीयुक्त पेय पदार्थ
कोक, फ्यान्टा, स्प्राइट, सोडाजस्ता चिनीयुक्त पेय पदार्थ तथा कार्बोहाइड्रेटले पनि शरीरमा असर पार्ने गर्छ । एक अनुसन्धानले जनाए अनुसार एक दिनमा एकपटक भन्दा बढी पटक सुगर तथा कार्बोहाइड्रेट डि्रंक्स पिउँदा स्पर्मको गुणस्तरमा र्‍हास आउँछ ।
सुगर बढी सेवन गर्दा इन्सुलिन रजिस्टेन्टलाई बढाएर अक्सीडेटिभ स्ट्रेस पैदा गर्दछ । जसका कारण स्पर्मको प्रभावकारितामा र्‍हास आउन सक्छ ।
४. कीटनाशक औषधी प्रयोग गरिएका खानेकुरा
सकेसम्म किटानाशक औषधी प्रयोग गरेको खानेकुरा खानबाट बच्नु पर्छ । किटनाशक औषधीको प्रयोग गरी तयार पारिएको फलफूल तथा तरकारीले स्पर्म काउन्ट कम गरिदिन्छ । यसमा प्रोसेस्ड मिट, स्याउ, स्ट्रबेरी, अंगूर, गोलभेँडा, पालुङ्गो, काँक्रो इत्यादि पर्दछन् । कीटनाशक तथा हर्मोन्सको असर यी कुराहरूमा धेरै पर्दछ । त्यसैले यस्ता खानेकुरा प्रयोग गर्नुपूर्व खानपानमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । साथै यसकेा प्रयोग गर्नुअघि राम्रोसँग धुन, पखाल्न जरुरी छ ।
चिया, कफी धेरै मन पर्ने मानिसहरूका लागि यस्ता बानी महँगो साबित हुनसक्छ । चिया, कफीजस्ता क्याफिनयुक्त पदार्थको सेवनले प्रजनन क्षमतामा असर पुर्‍याउँछ । चिया, कफी छोड्न नसकिए पनि यसको सेवन कमभन्दा कम गर्ने प्रयास गराँै ।
जुन खानेकुरामा फ्याट तथा सुगरको मात्रा बढी हुन्छ, त्यस्ता खानाले पाचन प्रणाली, मुटु तथा प्रजनन कोषिकाहरूलाई हानि पुर्‍याउँछ । यस्ता खानाले पुरुषको स्पर्म काउन्ट -शुक्रकीट)को विकासमा असर पुर्‍याउने गर्छ । यसमा स्टेराइड पनि सामेल हुन्छ । यसरी पुरुषहरूले शरीर बनाउने चक्करमा बाँझोपन निम्त्याउने गर्छन् ।